Intsha ayifundele amakhono ayindlala ukunyusa amathuba okuqashwa, kusho ongoti. USLINDILE KHANYILE noSIMANGALISO NTSHANGASE bayabika - Umbele I SMME Profiles I Labour I Economics I Agriculture I Executive Interviews I Personal Finance News
Intsha icetshiswa ngamaqhinga okungawusweli umsebenzi ngalesi sikhathi esidinga ubuchwepheshe bokuxhumana besimanje
KUMELE intsha icophelele indlela ekhetha ngayo imisebenzi ezoyifundela ngokuqalaza emikhakheni okunamakhono ashodayo nadingwa wumnotho manje. Ngokwenzenjalo izokwandisa amathuba okuthola umsebenzi uma isiphothule isikole.
Basho kanje ongoti abalekelela izinkampani ziqashe izisebenzi abaxoxe noMbele ngenselelo ekhona yokuntuleka kwemisebenzi eNingizimu Afrika.
Laba ongoti bathe njengoba isikhathi umhlaba osukusona usuthembele kakhulu kwezobuchwepheshe besimanje, phecelezi i-Fourth Industrial Revolution, kunamakhono amaningi athinta lo mkhakha oyinsika yomsebenzi kodwa ayindlala.
Bengeze ngokuthi amanye ala makhono yizinto umuntu angazifundisa zona ngaphandle kokuya esikhungweni semfundo ephakeme.
UNkk uPhillipa Geard, umsunguli noyisikhulu esiphezulu seRecruitMyMom neRecruitAGraduate, uthe: “Kufuneka ama-software developer, ama-computer scientist, ama-data analyst, nokungamakhono ashodayo eNingizimu Afrika. Kodwa uma ubuka abantu abafundele i-public administration (nokunjalo) bayinqwaba ngozuka.”
UNkk uGeard weRecruitMyMom neRecruitAGraduate
“Inkinga iqala umuntu esesesikoleni ekhetha izifundo kuGrade 10. Akubhekwa ukuthi ziyahambisana yini nafisa ukukwenza nanekhono lako. Abaningi futhi balinda baze bafike kumatikuletsheni bese kuthi uma esebheka isikhala enyuvesi agcine esengena kunoma yimuphi umkhakha lapho ethola khona isikhala. Loku kwenza umuntu afundele into angayazi naye uzoyenzani futhi amoshe iminyaka emithathu yempilo yakhe.
UNkk uNdlovu weCareer Hotspot
Isibalo sabantu abangasebenzi eNingizimu Afrika sisanda kukhuphukela ku-34.4% ngokwezibalo zeStatistics South Africa. Loku kubhebhezelwe nawukubheduka kweCOVID-19.
Nokho lesi sibalo siphezulu kakhulu uma kubhekwa intsha engasebenzi. Wu-64.4% wentsha ephakathi kweminyaka ewu-15 kuya kwewu-24 engasebenzi bese kuba wu-42.9% kwephakathi kweminyaka ewu-25 kuya kwewu-34.
UNksz uNosipho Khuluse, oneminyaka ewu-23, waseBulwer, maphakathi neKwaZulu-Natali, none-Diploma in Journalism and Media Studies zaseDamelin College ngo-2019, ungomunye wabantu abasha abaswele umsebenzi eNingizimu Afrika.
“Kusiza khona ukuthi nginomndeni ongesekayo, yize kunzima. Ekhaya ngihlala nabazala bami ababili nodadewethu omncane kodwa akulula neze. Ngiyawudinga umsebenzi wokwenza isimo sibe ngcono ngikwazi ukuzinakekela mina nomndeni wami.”
UNksz Khuluse one-Diploma in Journalism and Media Studies
UNkk uNdlovu uthi kuhle ukuthi abantu babheke imisebenzi engabavulela amathuba ngisho nakwamanye amazwe.
“Nakwa-supply chain maningi amathuba futhi hhayi nje eNingizimu Afrika kuphela kodwa nakwamanye amazwe nemisebenzi yasemanzini, i-maritime,” kweluleka yena.
Abaqashi babheka izinto eziningi. Isibonelo nje, uma ungakabi nawo umsebenzi ungavolontiya enkampanini engenzi inzuzo noma kube khona uhlelo lokusiza umphakathi olwenzayo. Ukufaka loko kwi-CV kukhombisa ukuthi uwumuntu osukumayo azame, uwumholi futhi awuzicabangeli wena kuphela;